Ubuntu Online Tour: Esi nwalee Ubuntu 11.10 site na ihe nchọgharị weebụ | Site na Linux
Ubuntu Online Tour: Esi nwalee Ubuntu 11.10 site na ihe nchọgharị weebụ
Ọ bụrụ na ịnweghị nkwenye ịwụnye Ubuntu 11.10, adịghị gị mkpa wedata ISO inwe ike igosipụta ya. Ugbu a ha nwere njegharị n'ịntanetị nke ahụ ga-enyere gị aka iji ihe ọ bụla ọ na-eweta ọ dịghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla, na-eji ihe nchọgharị weebụ nkịtị.
O doro anya na ọ bụghị ihe ntanetị ọzọ maka ịwụnye Ubuntu, nke a bụ naanị ngosipụta maka ndị na-ekpebibeghị ịwụnye sistemụ arụmọrụ a.
Ubuntu Online Njem: weebụ ka «nwalee» Ubuntu
Ubuntu Online Tour na-anabata gị nke kachasị mma na ụdị a, yana nke a kacha eji: Firefox ịnyagharịa, Thunderbird iji lelee email, onye na-ekiri onyonyo, ,lọ Ọrụ Software na ngwa niile ịchọrọ na anya ọhụrụ, na n'ezie, window nchọgharị, na mgbakwunye na ohere nke ịmepụta faịlụ ụlọ ọrụ.
Nwere ike ịga njem njegharị ma ọ bụ jee ije naanị gị. Isga na ebe nrụọrụ weebụ a ka akwadoro n'ihi na o gosipụtara uru na arụmọrụ nke Ubuntu na-enweghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla ma gosipụta etu ịdị mfe na enyi na gburugburu ebe a si dị.
Gaa na Ubuntu Online Njem
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ubuntu Online Tour: Esi nwalee Ubuntu 11.10 site na ihe nchọgharị weebụ
Ndụmọdụ: xdg-menu anaghị arụ ọrụ na Openbox
Kedu ihe dị iche na OpenOffice na LibreOffice?